DEG DEG:- Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo goordhaw lagu qabtay Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo goordhaw lagu qabtay Muqdisho
Ciidanka nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa goordhaw gacanta ku dhigay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, kaas oo sida la sheegay la doonayay in weerar loogu geysto mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen hay’addaha ammaanka ee dalka.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane oo goordhaw la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada Nabad Sugidda Qaranka ay gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa islamarkaana la doonayay sida uu sheegay in lagu qarxiyo hoteelka Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ninki saarnaa gaariga ee doonayay inuu weerarka qaraxa fuliyo isna gacanta lagu dhigay.
Waxaa haatan hoteelka Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho ka socda shir balaaran oo ay ku yeelanayaan waxgaradka iyo siyaasiyinta kasoo jeeda beesha Hawiye.
“Waxay ciidanka Nabad Sugidda Qaranka Soomaaliyeed gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo ninkii waday, waxaana baaritaano ku wada laamaha ammaanka ee dalka, iyagaa faah faahin kasoo saari doono arrintaan” Sidaas waxaa yiri afhayeenka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane.
Dhinaca kale, ciidamada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa habeenkii xalay sidaan oo kale gacanta ku dhigay gaari ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa, kaas oo sida la sheegay la doonayay in weeraro loogu geesto qeybo kamid ah magaalada Muqdisho, inkastoo aan la ogeyn goobta lagu weerari lahaa.